“Anigoo Yar Baan U Ciyaaray Arsenal, Nasiib-darro Way I - Axadle | Wararka Africa
Côte d’Ivoire and Ghana are rebelling in opposition to two American chocolate…
“Anigoo Yar Baan U Ciyaaray Arsenal, Nasiib-darro Way I
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Tottenham iyo xulka qaranka England ee Harry Kane ayaa shaaciyey inay Arsenal si nasiib-darro ah ugu ogolaatay inuu ka tago, xilligii uu ka mid ahaa da’yarteeda.
“Shakhtar Way Garaaci Doontaa Real Madrid, Dhibaatadii Inter
Kane oo ka jawaabayay su’aalo uu weydiinayay khabiirka kubadda cagta ee Piers Morgan ayaa si lama filaan ah afka uga hadhay, meeshana ka saaray suurtogalnimada inuu ka mid noqon karayo kooxda uu carruurnimada soo maray.
Piers Morgan oo tan iyo intii uu ciyaaraha ka fadhiistay aan marnaba qarsanin heerkiisa taageerada Arsenal, ayaa waraysi ka qaaday Harry Kane subaxnimadii hore ee Salaasadii maanta, kaas oo laga daawanayay telefishanka ITV.
Intii uu waraysigu socday, Piers Morgan ayaa weydiiyey Kane haddii ay suurtogal tahay inuu Arsenal u wareego, iyadoo uu waliba ogyahay xafiiltanka ka dhexeeya labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada London, waxaanu Harry Kane ugu jawaabay: “Anigu Arsenal waxaan u ciyaaray markii aan yaraa, nasiib-darro se waxay ii ogolaadeen inaan iska tago. Waxaan joogay Tottenham illaa markii aan 11 jirka ahaa, hadda ayaan aniguna u abaal-gudayaa.”
Morgan ayaa mar kale weydiiyey: “Miyaanad ku fikirayn inaad dib u raacdo raadkii hore?”
Kane ayaa ku jawaabay: “Gebi ahaanba maya, maya. Tottenham waxay ku jirtaa meel wanaagsan waqtigan, waanan ku faraxsanahay.”
Piers Morgan ayaa marka uu waraysigan qaadayay, waxa uu hayay xogta ah in Harry Kane uu waqti kusoo qaatay Arsenal oo uu shaadhkeeda xidhnaa markii ay da’diisu ahayd 10 jirka.
Sawirkan idiin muuqda waxa laga qaaday Harry Kane sannadkii 2004 oo uu xataa timaha madaxiisa u ekeysiiyey midabka dharka Arsenal oo waqtigaas ku guuleysatay horyaalka Premier League, iyadoo uu xataa nasiib u yeeshay inuu soo dhex-galo ciyaartoyda waaweyn sida Freddie Ljungberg oo isaguna qaabkan oo kale timaha u casaystay.
Sannadkii 2008 ayaa mar kale lagu sawiray Harry Kane isaga oo xidhay garanka Arsenal.
The Tigray offensive is entering its “final” phase, the prime minister announced
La Liga Oo Go’aamiyey Mushaharka Ugu Badan Ee Ay Kooxuhu